ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »6ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးဆက်ဆံရေးကောင်းသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်
Ralph Waldo Emerson တစ်ချိန်ကဖော်ပြထား, "ကျန်းမာရေးအကြီးမြတ်ဆုံးဥစ္စာဖြစ်၏။ "
သို့သော်ကံမကောင်းစွာ, ကျွန်တော်တို့ဝေးလွန်းများစွာမှာ operating နေကြတယ် "လိုငွေပြမှု။ "
ကွန်ပျူတာနှင့်ပိုမို sedentary လူနေမှုပေါ်မှာအပြစ်မတင်ပါနဲ့; hectic အချိန်ဇယားများကြောင့်အမြန်အစားအစာစားသောက်ဆိုင် overindulgence; ကျန်းမာသောအလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာပေးသို့မဟုတ်ရိုးရိုးမရှိခြင်း.
CNN.COM အဆိုအရ, အမေရိကရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့တွင်အအဝလွန်အကြားနှစ်ဆတက်ခဲ့သည် 1990 နှင့် 2010.
အဝလွန်ခြင်း၏နှစ်ပတ်လည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကျော်လွန် $140 ဘီလီယံခန့်.
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဗဟိုဌာနစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းထက်ပိုမိုဖြစ်စေသောတင်ပြထားပါတယ် 480,000 ထို U.S သေဆုံးမှုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း.
အဝလွန်နှင့်အဝလွန်သူများဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သောအချို့သောရောဂါတွေနှင့်ရောဂါများသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်: နှလုံးရောဂါ, ပုံစံ2ဆီးချိုရောဂါ, အချို့သောကင်ဆာနှင့်သွေးတိုးရောဂါ.
ဒါပေမဲ့, ကောင်းသောသိတင်းရှိင်. ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းမျိုးရိုးလိုက်အကြောင်းရင်းများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ကြသော်လည်း, ကြမ္မာ, ချောကလက်အတွက်သို့မဟုတ်တစ်ခုမျိုးဆက်, ကျန်းမာရေးပိုကောင်းများကိုငါတို့သည်ယူနိုင်ပါတယ်အချို့သောတက်ကြွစွာအတိုင်းအတာရှိပါတယ်.
1. ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကောင်းဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု. ပိုကောင်းကျွန်ုပ်တို့ခံစား, ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်, (ပုံမှန်အားဖြင့်), အရာပတ်လည်မှာဖြစ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးသာယာ. သင်သည်အစဉ်အမြဲအစဉ်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ဝေဒနာအကြောင်းညည်းညူသူတစ်ဦးကိုလှည့်ပတ်ဖူး? သို့မဟုတ်သူတို့သည်အစဉ်အမြဲဂနာမငြိမ်ကြောင့်သင်တို့မှာ snaps? ဒါဟာကျိန်းသေပျော်ရွှင်စရာအချက်တစ်ချက်ပေါ်မှာ damper ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်.
2. ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပိုကောင်းသက်လုံကိုအထောက်အကူပြုရန်, ခွန်အား, နှင့်တက်ကြွ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြု.
3. ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကျွန်တော်တို့ကိုသီးခြားလွတ်လပ်သည့်ဖြစ်ခွင့်ပြု, နှင့်အခြားသူများကိုမလိုအပ် (သို့မဟုတ်ပြင်ပအကြောင်းအချက်များ) ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရန်; ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်သောသူတို့အဘို့စဉ်းစားသုံးသပ်ပြသ.
4. ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် သာ. ကြီးအသက်ရှည်ပြီးအသက်တာ၏ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးအတွက်ထောက်ပံ့.
5. ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ငွေကိုသက်သာ. မှန်တယ်. ဒါဟာငွေကုန်ကြေးကျဆေးဝါးတားဆီးနိုင်သည်, စဉ်ဆက်မပြတ်ဆရာဝန်၏လာရောက်လည်ပတ်သောစရိတ်, မြင့်မားသောအာမခံပရီမီယံ.
6. ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အသွင်အပြင်တိုးမြှင့်. မီးအသားအရေနှင့်အတူမိန်းကလေးကိုစဉ်းစားပါ, ခြောက်ထုပ်နှင့်အတူ stud, သူတို့ကိုသူတို့ဝတ်ဆင်မည်သည့်အဝတ်အစားအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းချောမွေ့ပြောင်လက်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူရှိသူများ. "သင်အကောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ, သင်တို့သည်ကောင်းသောခံစားရတယ်။ "
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောများမှာ, လျင်မြန်တဲ့အကြံပြုချက်, ရှည်စွာတည်မြဲတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးကို.
နည်းနည်းခြေလှမ်းများ. အသက်တာ၌များစွာသောအခြားအမှုအရာနှင့်တူ, တဖြည်းဖြည်းချင်းချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. နေ့ရက်တိုင်းကိုပိုပြီးအသီးကိုသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားသုံးခြင်းနှင့်ဖြည့်ညှင်းအတွက်ကိုစားခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်ပါ.
လေ့ကျင့်ခန်းတွေမကြိုက်ကြဘူး? အခြားရွေးချယ်စရာကိုစဉ်းစားပါ. ဥပမာအားဖြင့်, ငါသည်အခုန်ကိုချစ်. သင်ကခုန်လည်းကယ်လိုရီကိုမီးရှို့နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာဆက်နေရန်ပျော်စရာလမ်းကြောင်းကိုသိခဲ့ပါ? သင့်ဒေသအတွင်းရှိ Zumba လူတန်းစားယူပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ. သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းဘိုးလင်းသို့မဟုတ်ရေကူးသင့်ရဲ့အကြိုက်ကိုပိုမိုပါလိမ့်မယ်. တစ်ခုခုဘာမျှမထက် သာ. ကောင်း၏.
ပိုပြီးရေကိုမသောက်. ဒါဟာအရေပြားများအတွက်ကောင်းပါတယ်နှင့်အညစ်အကြေးကိုထုတ် flushes.
သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်အားပေးမည်ဟုနိုင်ပါသည်ကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည်– စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ.
မှတ်ချက်: ဤအချက်အလက်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထံမှဆေးကုသမှုအကြံပြုချက်အစားထိုးဖို့မရည်ရွယ်ပါသည်. ဘယ်မှာသက်ဆိုင်သောသင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်.